Ukuphuma: Yandisa umxholo wakho weNtengiso ye-ROI kunye noMxholo oDibeneyo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Meyi 14, 2021 NgoMvulo, Meyi 16, 2022 Douglas Karr
Kwipodcast yakutshanje noMarcus Sheridan, wathetha ngamaqhinga oshishino aphosakeleyo xa bephuhlisa iinzame zabo zentengiso yedijithali. Ungamamela sonke isiqendu apha:
Esinye isitshixo awathetha ngaso njengabathengi kunye namashishini baqhubeka nokuzilawula ngokwabo kuhambo lwabathengi ngumxholo wokudibana. UMarcus ukhankanye iintlobo ezintathu zomxholo onxibelelanayo owenza ukuba isikhokelo-ngokwakho:
Ukuzicwangcisela -Ukwazi kwithemba lokuseta umhla kunye nexesha lokunxibelelana nophawu ngedemo, iwebhsayithi, okanye umnxeba wokufumanisa.
Ukuzixabisa -Ukwazi kwithemba lokuqonda ngcono iindleko zemveliso okanye zenkonzo. Oku akufuneki ukuba kufezekiswe ngokucacileyo, kodwa nokubonelela ngoluhlu kubalulekile kuhambo.
Ukuzihlalutya ngokwakho -Ukwazi ukubanethemba lokuhamba kuthotho lwemibuzo okanye iziqinisekiso ezibanceda ukuba bafumane iingcebiso malunga neemveliso okanye iinkonzo ozithengayo.
Ukuphuma: IPlatifomu yokuNxibelelana kweMixholo
Ngokungafaniyo neentengiso, umxholo odibeneyo wongeza ixabiso ngokwakha ukuthembana kunye nokunceda ukuqhuba komthengi ukuya kwinqanaba elilandelayo kuhambo lokuthenga. Umxholo wokudibana unomdla wentsholongwane kwaye usebenza ngokukuko ekubandakanyeni abasebenzisi bakho… phantse i-30% ngaphezulu kwephepha lokufika elimileyo. Umxholo osebenzisanayo ukwakuvumela ukuba ufumane ukuqonda ngakumbi kubasebenzisi bakho njengoko bephendula imibuzo kwaye bengenisa idatha.
Ukubandakanya umxholo onxibelelanayo uqhuba iziphumo ngo:
Yongeza iiRhafu zokuGuqula -Sebenzisa i-Outgrow ye-1000 + yeetemplate ezintle ezenziwe kwangaphambili ukuphucula amaxabiso akho okuguqula ngaphezulu kwe-40%!
Lungiselela ukukhokela kwaye ungeze ixabiso -Nika iimpendulo ezenzelwe wena kwimibuzo ecinezelayo yomthengi wakho, ngelixa ulungelelanisa izikhokelo zakho.
Papasha ngaphakathi kweMizuzu naphi na -Faka umxholo ongaphandle kwiphepha lakho, njenge popup, kwingxoxo, phuma kwinjongo, okanye kwisizinda sakho.
Uhlalutyo olukrelekrele kunye nokudityaniswa kwedatha -Fumana ukuqonda kwabathengi ngelixa ubanceda, hlula abaphulaphuli bakho kwaye udibanise idatha yakho nezixhobo ezingaphezu kwe-1000.
Isitudiyo soPhuculo soMxholo esiSetyenziswayo
Yonke ye UkuphumaUbeko luvavanyiwe kwaye lwenzelwe ukuguqulwa, ukubandakanyeka, ubungakanani bescreen, izikhangeli kunye nokwabelana. Umakhi wabo okrelekrele unikezela ngokhetho olunye, ukhetho oluninzi, izilayidi ezinamanani, izikali zoluvo, ukulinganisa, umhla / ixesha lokukhetha, ukulayishwa kwefayile, nokunye okuninzi. Umxholo onxibelelanayo onokuwakha ubandakanya:
Uvavanyo oluHlelweyo / uVavanyo
Umxholo unokuphawulwa ngokupheleleyo ukubonisa ibhrendi yakho, unikeze amasebe angenasiphelo kumbuzo ngamnye, unikeze imiyalezo enemiqathango esekelwe kwiziphumo, kwaye unokuboniswa ngohlalutyo lwefunnel ukunika ingqiqo ekusebenzeni komxholo wakho osebenzisanayo. Iziphumo zexesha lokwenyani zinokubandakanya iitshathi zemigca eguqukayo, iitshathi zephayi, iitheyibhile, iitshathi zebha, iitshathi zerada, okanye iitshathi zepolar.
Ukuphuma kusebenza ngcono kuthi kuneebhlog kunye nee-ebook ngenxa yomntu oyinikezelayo. Ayisiyonto yokufunda nje kuphela okanye ukubukela umxholo kwakhona, ithemba ngalinye lifumana ulwazi olulungiselelwe wena kunye noluchanekileyo ngexesha lokwenyani nokuba kungokubala ngekhalityhuleyitha, imibuzo, ingcebiso okanye incoko.
U-Leonard Kim, Umphembeleli oPhezulu weNtengiso, uForbes
Ukuphuma ibandakanya ngaphezulu kwe-1,000 yokudityaniswa kunye nedatha eqhelekileyo, intengiso, kunye nezixhobo zentengiso ezibandakanya i-Google Sheets, i-Aweber, MailChimp, Marketo, Hubspot, GetResponse, Emma, ​​MailerLite, Salesforce Pardot, Salesforce CRM, Campaign Active, Drip, kunye nokunye!
Yakha umxholo wakho wokuqala wokunxibelelana kunye nokuphuma simahla
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa eyam Ukuphuma ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: iitshathi zebaringcinga yesebezibaloCalculatorikharityhulam umakhiingxoxoiingxoxoumyalezo othunyelweyoumakhi wefomiifomuUhlalutyo lwefanelikonyusa amazinga okuguqulwayandisa utshintshoukwandisa ukubandakanyekaukwandisa ukuthengisaumxholo wee-interactiveiitshathi zemigcaumakhi wovavanyo okwi-intanethiIsakhi sokubala onlineumakhi wengxoxo kwi-Intanethiumakhi wemibuzo kwi-intanethiumakhi wophando kwi-Intanethiisixhobo sophando kwi-Intanethiukuphumaiitshathi zepayiIitshathi zepolarumakhi wemibuzouyakhawulezaIitshathi zeradarumakhi wophandomacwecwe
I-Syncari: Dibanisa kwaye ulawule iiDatha eziSebenzayo eziSebenzayo, ukuZenzekelayo kokuSebenza nokuSasaza ulwazi oluthembekileyo naphi na.
Jun 17, 2021 ngo-2:28 AM
Isithuba esihle njengesiqhelo uDouglas,
Umxholo ungaphelelwa lixesha ngokukhawuleza kwi-intanethi, ngakumbi ukuba ukushishino olukhawulezayo. Kwanomxholo obizwa ngokuba "ngumxholo oluhlaza", ofanele ukuba usebenze iminyaka eliqela, ngokwethiyori, usenokungatsali mdla kubafundi okanye kuGoogle kwiminyaka embalwa edluleyo.